About ZM - Ningbo Zhengmao Electronics Co., Ltd
2-Electrode Gas Ihapu tube
3-Electrode Gas Ihapu tube
Ịmafe ebua Abụọ
SMD gas orùrù tube
High-Power gas orùrù tube
Na-adaba adaba njem na ngwa ngwa echekwa mmepe, Ningbo Zhengmao Electronics Co., Ltd. (na a na mbụ aha Ningbo Shitong Telecommunication akụrụngwa Factory) emi odude ke edem usụk Ningbo Zhejiang Province, China. Tọrọ ntọala na 2002, anyị ụlọ ọrụ specializes na-eme nnyocha na n'ichepụta Ịmafe ebua gaps, Gas Ihapu tube na ndị ọzọ.
Ịmafe ebua Abụọ (SSG) nwere a voltaji tumadi sitere na site 110V ka 800V na ọtụtụ uru tinyere zuru ezu iche, ezi nkwụsi ike na ogologo ndụ (ọ ga-Switched ruo ihe karịrị ọtụtụ puku ugboro na ọtụtụ nde ugboro). Ngwaahịa a na-bụ-eji maka mgbanye na zoro ụgbọ dị arọ ma ọ bụ n'okporo ámá oriọna, wdg
Gas Ihapu tube bụ mgbochi ịka nká na-elu mkpuchi eguzogide, obere capacitance na ngwa ngwa. Ọ na ọtụtụ-eji ihe karịrị-voltaji nchedo telecom na ndị ọzọ na ngwá electronic dị ka nke ọma dị ka àmụmà nchebe.
Anyị bụ ndị a so n'okpuru njirimara nke Quality Management System (ISO9001-2008QMS). Anyị na ngwaahịa niile izute International ọkọlọtọ nke IEC61643-311, Nkwanye Standard nke Itu-T K.12 na mba ọkọlọtọ GB / T9043-2008 / Communication Equipment N'ime-voltaji Protection na General ụzụ Ọnọdụ na Gas Ihapu tube, wdg Gas Ihapu tube bụ RoHS Dabara, nwekwara e gbaara site German TüV, American Mankeumman na SGS.
Dabere na Quality, nzube anyị na-eju afọ ahịa anyị site na-rụọ ọrụ ka anyị ngwaahịa mma na ọrụ izute gị mkpa.
Okwu: Hengxi Town Industrial Area, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, China